नयाँ बर्षमा टेलिकमको आकर्षक अफर - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
नयाँ बर्षमा टेलिकमको आकर्षक अफर
प्रकाशित मिति: 13 April, 2021 8:05 am
काठमाडाैं ३१चैत । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी विभिन्न प्याकेज सहितको स्प्रिङ अफर सार्वजनिक गरेको छ । सो अफर अन्तर्गतका सेवाहरु आजदेखि ९० दिनसम्म उपयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । यसअघि उपलब्ध विन्टर अफर अन्तर्गतका प्याकेजमा केही थप सुविधासहित स्प्रिङ अफर उपलब्ध गराइएको टेलिकमको भनाइ छ ।
साथै, २ घण्टासम्म असीमित डाटा प्रयोग गर्न सकिने गरी रु. ३० को अर्को अफर पनि थप गरिएको छ । यो अफर २४ सै घण्टा कुनैपनि समयमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी डाटा प्याक अन्तर्गत नै जम्मा रु. ९५ मा १.५ जिबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने अफर पनि उपलब्ध गराइएको छ । यो प्याक ७ दिनसम्म २४ सै घण्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।